यसरी बढाउन सकिन्छ कक्षाकोठामा बालबालिकाको सहभागिता
हाम्रा धेरैजसो बालबालिकाहरू विद्यालय जान त्यति रमाइलो मान्दैनन् । किनकी उनीहरूमा विद्यालयका शिक्षकहरूले त्रास भरिदिएका हुन्छन् । धेरैजसो नीजि विद्यालयहरूमा गेटमा बस्ने पालेदेखि कक्षा शिक्षक अनि प्रिन्सिपलले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने नाममा मानसिक त्रास सृजना गरेका हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालय राजनीतिकरणले अस्तव्यस्त छन् । शिक्षकहरू पढाउन जाँगर गर्दैनन् । त्यसैले अभिभावक र विद्यार्थीको सामुदायिकमा रुचि कम देखिन्छ । तर तलका केही उपाय अपनाउने हो भने विद्यार्थीलाई विद्यालयमा र विद्यालयका कक्षाकोठामा आकर्षित गरी उनीहरूको उल्लेख्य सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।
२. हरेक बालबालिका विशिष्ट हुन्छन् । साथै उनीहरूको सिक्ने तरिका पनि विशिष्ट हुन सक्छन् । त्यसैले, हरेक बालबालिकालाई उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा सहयोग गर्ने तथा सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्ता अवसरले बालबालिकालाई आफै बुझेर पढ्ने, सिक्ने तथा आत्मविश्वासको साथ कक्षामा सहभागिताका लागि प्रोत्साहित गर्दछ ।
३. कक्षाकोठाको उचित प्रबन्ध (कक्षाकोठाको व्यवस्थापन) बालबालिकाको सहभागिता बढाउनका लागि सहायक हुन्छ । यसका लागि शिक्षकले बालबालिकालाई यू आकार वा गोलाकार अथवा अन्य आकारमा बसाउन सकिन्छ । जसले गर्दा हरेक बालबालिकासँग पहुँच पुग्न सकोस् साथै, बालबालिकालाई शिक्षकसँग कुराकानी गर्न सहज होस् ।
४. हरेक बालबालिकालाई उसको नामले बोलाउनु पनि सहभागिताका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण कुरा हो । जसले गर्दा बालबालिकालाई एउटा पहिचान मिल्दछ । यसले बालबालिकाको प्रगतिबारे जानकारी लिनुका साथै एक शिक्षकलाई बालबालिकासम्म विशिष्ट फिडब्याक पुर्याउन मार्गदर्शन मिल्दछ । यसको प्रभाव सिधा रूपमा बालबालिकाको सकारात्मक स्व–विकासमा पर्दछ ।
५. बालबालिकाको सिकाइमा सहभागिता कति छ ? यो जान्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । यसका लागि बालबालिका कुनै पनि विषयमा कति बुझे भनेर यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्न आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न सकिन्छ ।
६. कक्षाकोठामा बालबालिकाहरूलाई अन्य साथीहरूसँग पनि सिक्नका लागि (पियर लर्निंङ) प्रोत्साहित गर्नु पनि सहभागिता बढाउने दृष्टिले महŒवपूर्ण मानिन्छ । उनीहरूलाई छलफल गर्दै रमाउँदै सिक्न दिनुपर्दछ ।
७. कुनैपनि कक्षामा बालबालिकाको समस्या प्रति बेवास्ता गर्नुहुन्न । जसले गर्दा बालबालिकाको सिक्ने प्रक्रियामा आउने समस्यालाई बुझ्न र त्यसको समाधान निकाल्न मद्दत मिल्दछ । जस्तो कि कुनै बालबालिकालाई कुनै शब्द लेख्न, पढ्न, बुझ्न समस्या भएको हुन सक्छ ।
८. कुनैपनि कक्षालाई सफल बनाउन असल निर्देशनहरुको सकारात्मक भूमिका रहने गर्दछ । त्यसैले, शिक्षकले बालबालिकाले सजिलै बुझ्न सक्नेगरी स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ ।
९. शिक्षकको अगाडि बालबालिकाको नयाँ सिक्ने विषयसम्बन्धी लक्ष्य स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसले गर्दा शिक्षकले बालबालिकाका सामुन्ने स्पष्ट अपेक्षा राख्न पाउँनेछन् । यसले बालबालिकाको सिक्ने इच्छा बढ्छ तथा उनीहरू कठिन चुनौतीको सामना गर्नका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार हुन्छन् । ती चुनौती पार गरेपछि उनीहरू आत्मविश्वासले भरिपूर्ण तथा सन्तुष्ट महसुस गर्छन् ।
१०. आफ्नो कक्षाकोठाको अनुभवमाथि विचार गर्ने प्रक्रियामा शिक्षक चिन्तन गरिरहेका हुन्छन् । जब शिक्षक आफ्नो कक्षाको अनुभवमाथि विचार गर्न थाल्छन् तब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ के राम्रो भइरहेको छ र सुधार कहाँ गर्नुपर्छ ।
यस विचार प्रक्रियामा आएका नयाँ धारणाले कक्षा सञ्चालन अझ राम्रोसँग गर्ने उत्प्रेरणा जाग्ने हुन्छ । जस्तो कि एकजना शिक्षकले कक्षा १ र २ का विद्यार्थीहरूलाई पुस्तकालय प्रयोग गर्ने ज्यादा मौका दिए । यस दौरान उनले पाए कि यसबाट विद्यार्थीको अड्की–अड्की पढ्ने समस्यामा सुधार आयो । साथै, विद्यार्थीमा अनुमान गर्ने कौशल विकसित भइरहेको छ । विद्यार्थीले एक अर्कामा आफ्नो विचार तथा जिज्ञासा आदान–प्रदान गर्न थालेको समेत पाइयो । उसबाट विद्यार्थीको मौखिक अभिव्यक्तिको कौशलसमेत विकास भएको देख्न सकिन्छ ।